ရေရှည် ဝင်ငွေ ရရှိစေရန် မြေညံ့စိုက်ခင်း နေရာများတွင် လျှော်ဖြူပင် အစားထိုး စိုက်ပျိုးသူ မျ? - Yangon Media Group
ရေရှည် ဝင်ငွေ ရရှိစေရန် မြေညံ့စိုက်ခင်း နေရာများတွင် လျှော်ဖြူပင် အစားထိုး စိုက်ပျိုးသူ မျ?
ဆားလင်းကြီး၊ ဇွန် ၁၄
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဆားလင်းကြီးမြို့ နယ်တွင် ကျောက်ကုန်းမြေညံ့စိုက် ခင်းနေရာများရှိရာ အဆိုပါနေရာ များတွင် ရေရှည်ဝင်ငွေရရှိမည့် လျှော်ဖြူပင်များ အစားထိုးစိုက်ပျိုးသူများလာကြောင်း သိရသည်။
လျှော်ဖြူပင်မျိုးများကို ဆားလင်းကြီးမြို့ တောင်ပေါ်ကျောင်း တောအုပ်ထိန်းသိမ်းနယ်မြေတွင် စိုက်ပျိုးထားသည့် အပင်ကြီးမှရရှိ သော အစေ့များအား မျိုးစေ့အဖြစ်ရယူကာ ဆားလင်းကြီးမြို့ပေါ်ရှိယာမြေလုပ်ကိုင်သူများမှ ပျိုးပင်ငယ်ပြုစုပျိုးထောင်စိုက်ပျိုးကြကြောင်း၊ ယာမြေစိုက်ခင်းတချို့မှာ မြေညံ့သည့် ကျောက်ကုန်းမြေဖြစ်ရာ အဆိုပါယာမြေများတွင် ပဲစင်းငုံနှင့်နှမ်းကိုသာ အများဆုံး စိုက်ပျိုးကြရာတွင် နှစ်စဉ်သီးနှံအထွက်နည်းသဖြင့် မြေအမျိုးအစားနှင့်ကိုက်ညီပြီး ရေရှည်ဝင်ငွေရရှိ မည့် လျှော်ဖြူပင်များကိုပြောင်းလဲ စိုက်ကြရာ ယခုအခါမြို့နယ်အတွင်း ဧက ၅ဝ ဝန်းကျင်အထိရှိနေပြီဖြစ် ကြောင်း ဒေသခံစိုက်ပျိုးသူများထံမှ သိရသည်။
”မျိုးက တောင်ပေါ်ကျောင်းဝင်းထဲရှိနေတဲ့လျှော်ဖြူပင်ကြီးကရသလို မကွေးတိုင်းဘက်ကလာတဲ့ ကျွန်းဖိုပင်ရွာက မျိုးဝယ်စိုက်တဲ့သူ တွေရှိတယ်။ သူကစိုက်ရတာ ကရိကထမများဘူး။ ထိန်းသိမ်းရေးလည်း အထူးဂရုစိုက်စရာမလိုဘူး။ သုံးနှစ် ကျော်ရင် အပင်ကအစေးစထွက်ပြီ။ စထွက်ချိန်မှာ တစ်ပင်နှစ်ကျပ်သား ထွက်တာဆိုတော့ ဒီရက်ပိုင်းပေါက် ဈေးနဲ့ဆိုရင် တစ်နေ့ဝင်ငွေကျပ်လေး သောင်းကျော်ရတယ်။ ရေရှည်တွက်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်စိုက် နေတဲ့ပဲစင်းငုံတို့၊ နှမ်းတို့ နွားစာ ပြောင်းစိုက်တာတို့ထက် ဝင်ငွေအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဆားလင်းကြီးမြို့အမှတ် (၂) ရပ်ကွက်မှ လျှော် ဖြူပင်စိုက်ပျိုးသူတောင်သူ ဦးမြင့် အောင်က ပြောသည်။
အဆိုပါ လျှော်ဖြူပင်ပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးမှုကို ဆားလင်းကြီး၊ ကျွန်းဖိုပင်၊ ဘိုက်သရက်၊ ရွှေသမင်၊ ပန်းထူး၊ နီပါးတန်းစသောကျေးရွာများရှိ ယာမြေများတွင် စိုက်ပျိုးသူများလာကြသည်။ လျှော်ဖြူပင်ကို တချို့က ဆေးကုလားမပင်အဖြစ် ခေါ်ဝေါ် ကြရာ လျှော်ဖြူပင်မှထွက်သော အစေးများကို ဆေးဝါးလုပ်ငန်း၊ ကားမှန်လုပ်ငန်း၊ တယ်လီဖုန်းအစိတ်အပိုင်းတချို့၊ ငှက်သိုက်စ သော ကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ရာတွင် အဓိကကုန်ကြမ်းအဖြစ် အသုံးပြုကြသလို ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွင် ဆေးကုလားမဖျော်ရည် နှင့် ဆီးဝမ်းဆေးများအတွက် အသုံးပြုသဖြင့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပဈေးကွက်ဝင်ပစ္စည်းဖြစ်၍ မန္တလေးမြို့ကုန်သည်များမှ လျှော်ဖြူအစေးထွက် ရှိရာဒေသများသို့ ကွင်းဆင်းဝယ်ယူမှုရှိကြောင်း သိရသည်။
ယခုနှစ် တောင်ပြုန်း ပွဲတော်တွင် ဆိုင်ခန်းနေရာများကို တိုးချဲ့ချထားပေးသွားမည် ယာဉ်ကြော ပိတ
ရန်ကုန်တွင် ချထားပေးနိုင်သည့် အဆညအိမ်ရာနှင့်အိမ်ခန်း ခွဲတမ်း ၃ဝဝ ကျော်သာရှိပြီး လျှောက်ထ??
စပါး၏ ရာသီအဖွင့်ပွဲစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်ရန် ဟယ်ရီကိန်း ရည်မှန်း
မြန်မာ-ကိုရီးယား ချစ်ကြည်ရေး(ဒလ)တံတား ပန္နက်တော်တင် မင်္ဂလာအခမ်းအနားကို နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင?
ပွင့်ဖြူမြို့နယ်၌ ဧရာဝတီမြစ်ရေ ပြန်လည် ကျဆင်းသွားပြီဖြစ်၍ ယာယီ ပိတ်ထားသည့်ကျောင်းအချို့ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်
မန်ယူတွင် သင်ခန်းစာများ ရခဲ့ကြောင်း လင်ဒီလော့ဖ် ပြောကြား